Electronic Money Detector - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 513 view counts
စြေးနူနျး : 10000 Kyats per Piece(s)
Model : KK-18
အရွယ် : 17.5 x 11.5 x 10 cm
Detection Method : Ultraviolet Detection , Watermark Detection
Number of UV Lamp : 1 Fluorescent UV Blue Lamp
Power Supply : AC220~240V 50/60Hz
ငွေတု၊ လိုင်စင်တု၊ ပက်စ်ပို့တု၊ စာရွက်စာတမ်းတု၊ လျှို့ဝှက်မြှုပ်ကွက်ပါသောIDကဒ်များ၊ ATMကဒ်၊ VISA ကဒ်စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ထုတ် စစ်ဆေးနိုင်သောစက်ဖြစ်ပါသည်။ UV sensitive ink အသုံးပြုထားသော Magic Penဖြင့် လျှို့ဝှက်စွာရေးသားထားသည့်စာများကိုလည်း ဖော်ထုတ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အမှုအခင်းများတွင် ကျန်ရစ်သော သက်သေခံ လက်ဗွေ၊ လျှို့ဝှက်ချက် စသည်တို့ကိုလည်း အနုစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် Ultraviolet မီးချောင်း ပါရှိကာ 220V ပလပ်ပေါက်တွင် ထိုးရပြီး စွမ်းအင် 4Wသာစွဲပါသည်။ Portable စားပွဲတင်အဖြစ်သုံးနိုင်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စစ်ဆေးရသော ယာဉ်ထိန်းရဲများ၊ ငွေကြေးများစွာ ဝင်/ထွက်ရှိသော Bank. Money Changer များ၊ passport စစ်ဆေးရသော ဌာနများ၊ မှုခင်းစစ်ဆေးရေးဌာနများ သုံးစွဲကြပါသည်။
•Electronic Money Detector (free gift 1 of magic pen.)
• Compact Electronic Money Detector
• Uses 1 Fluorescent UV Blue Lamp to illuminate currency
• Uses Ultraviolet detection
• Can also be used to verify Philippine Peso, US Dollars, Euros, Passport, Credit Card, I.D. Card and other items printed withaUV sensitive ink
For Electronic Money Detector
May I get the quotation for "Electronic Money Detector" ?